Indhaha ayay ku beeshay Kashmir, balse ma aysan rajo beelin
Thursday January 11, 2018 - 16:13:14 in by Abdikarim Saed Salah
Hargeysa (Horseednews.com) Magaceedu waa Insha Mustaq, waa 16 jir, waxa ay waligeed ku riyoon jirtay in ay barato dawada, balse waxa ay riyadaas ka quusataymarkii uu indhaha tiray rasaasta cinjirka ah oo ay rideen ciidammada Hindiya ee halkaas ka tal
Hargeysa (Horseednews.com) Magaceedu waa Insha Mustaq, waa 16 jir, waxa ay waligeed ku riyoon jirtay in ay barato dawada, balse waxa ay riyadaas ka quusataymarkii uu indhaha tiray rasaasta cinjirka ah oo ay rideen ciidammada Hindiya ee halkaas ka taliya.
Waxase ay xulatay xirfad kale oo ah barashada muusiga oo ay hadda ka baastay imtixaam muhiim ah sida ay kusoo waramayso wariyaha BBC-da Abid Bhat oo waraysi la yeelatay gabadhan.
"Waa waqtigii iigu farxadda badnaa muddo dheer kadib" ayay tiri Mustaq , halka aabaheed uu shegay in waxa dhacay ay yihiin mucjiso rabbaani ah.
11 kii July, 2016-kii ayay Mushtaq banaanka ka maqashay shanqar, daaqada ayay furtay, balse waxaa indhaha ka galay rasaastii ay ridayeen ciidammada Hindiya.
Muddo saddex bilood ah ayay ku qaadatay galaa baxa isbitaalada si ay dib ugu hesho araggeeda, balse wax u suurtogalay ma jiraan.
Iyada oo rog rogaysa baalalka buugaagteeda, indhaheeduna ay illin ka qubanayso ayay BBC-da u sheegtay "Hadda waan dareemi karaa oo kaliya, balse ma arki karo".
Bishii November, 2017-kii ayay gashay imtixaamkeeda, dowladda waxa ay usoo xushay ardayad taas oo kor ugu akhrinaysa su'aalaha, kadibna qoreysa jawaabaha ay Mushtaaq bixiso.
Markii ay indhaha beesha waxa ay falkaas cambaareeyay adduunka oo dhan, waxaana dowladda Hindiya lagu eedeeyay in ay isticmaalayso awood dheeraad ah si ay u caburiso dadka shacabka ah ee mudaaharaadaya.
Balse militariga Hindiya waxa ay sheegeen in rasaasta ay gabadha ku indho beeshay ay yihiin kuwa cinjir ah oo aanan dadka dili karin.
Mustaq waxa ay ka mid tahay boqolaal dadka ah oo ku dhaawacmay isku dhacyada ka dhasha xukunka Hindiya ee Kashmiir.
Muddo 60 sano ah ayay gobolkan Kashmiir ka taagantahay xasarad, labo jeer ayayna ku dagaalameen Hindiya iyo Pakistan.
Waxa ka dhigay arrinta Mushtaaq mid gaar ah, oo aad murugo u leh, ayaa ah in ay beeshay labadeeda indhoodba, waxaana loo malaynayay in aysan waxbarashadeeda dhamaysan doonin, balse dad badan ayaa la yaabay in ay ku baastay imtixaamka kama dambeysta ah ee fasalka 10aad ee Kashmiir.
Marka la is barbar dhigo maadooyinka muusiga iyo xisaabta, waxa ay iyadu jeceshahay xisaabta, balse waxa ay garwaaqsaday in indha la'aanta darteed ay xisaabta ku adkaan doonto, sidaas darteed waxa ay xulatay muusigga oo ka fudud.
Waxa ay sheegtay ka hor intii aysan dhaawacmin in aysan ku adkaan jirin in ay wax xifdiso, balse hadda ay tahay in macalinka uu afar jeer ugu celiyo wax kasta.